Sevilla Oo Jilbaha Dhulka U Dhigtay Barcelona Ka Dib Markii Guul Weyn Kaga Gaadheen Garoonkooda |
Sevilla Oo Jilbaha Dhulka U Dhigtay Barcelona Ka Dib Markii Guul Weyn Kaga Gaadheen Garoonkooda
Kooxda Barcelona ayaa niyadjab xoog leh kala kulantay Sevilla ka dib markii guuldarro 2-1 dhabarka u Saartay kulankii xiisaha lahaa ee ka dhacay garoonka Ramón Sánchez Pizjuán Stadium.
Barcelona ayaa garoonka Ramón Sánchez Pizjuán Stadium marti ugu ahayd kooxda Sevilla, waxayna Barcelona kulankan ka fikiraysay inay ugu guul ka soo gaadho kooxda Sevilla si ay ugu yaraan si ku meel gaadh ah hogaanka La Ligaha ula wareegto.
Barcelona ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo Lionel Messi iyo Andres Iniesta ay dhaawac ku maqan yihiin, laakiin wali Luis Enrique ayaa kooxda inteeda kale wali kalsoon ku qabay, wuxuuna Luis Enrique kulankan dib helay goolhayahiisa Claudio Bravo oo dhaawac kaga maqnaa, waxaana kursiga kaydka loo dhaadhiciyay Ter Stegen oo lagu eedeeyay qaladaad badan intii uu Bravo dhaawaca ku maqnaa. Da’yarka Munir ayaa weerarka kula bilawday Neymar iyo Suarez.
Kulankan ayaa ku bilawday xamaasad badan iyayada oo labada kooxoodba ay fursad abuuris bilaabeen. Fursada ugu halista badan ayay Barcelona heshay iyada oo Neymar uu fursad halis ah helay laakiin goolhaya Sevilla ee Sergio Rico.
Markale daqiiqadii 9 aad Munir ayaa helay fursad uu kubbad uu xerada ganaaxa Sevilla ku helay balse kubbada ayuu birta dul marayay. ciyaarta ayaa noqotay mid waali ah ils amarkaana ay labada kooxoodba ay isku qaadayeen weeraro halis ah.
Sevilla ayay fursadaha ugu halista helay Gameiro kaas oo laba fursadood oo halis ah ku helay goolka Barcelona, fursada hore ayaa ahayd mid koorne lagu soo tuuray wuxuuna si fiican madaxa ugu darbeeyay kubbada laakiin Bravo ayaa jawaab fiican ka bixiyay markale Gameiro ayaa Bravo kubbad kula soo baxay kadib markii uu farsamo fiican ku soo dhaafay difaaca Barcelona laakiin markale Bravo ayaa muujiyay tayadii uu Barcelona kala maqnaa, isaga oo inta uu soo baxay Gameiro kubbada koorne uga saaray.
Laakiin daqiiqada waalida ahayd ayaa timid, daqiiqadii 23 aad, waxaana la odhan karaa daqiiqadan waxaa dhacay waxaaybo ay adag tahayu in qoraal lagu sharaxo. Ugu horayn Barcelona ayaa weerar halis ah soo qaatay iyada oo laba difaac ah iyo Neymar iyo Suarez ay cidlo iska heleen.
Neymar ayaa difaaciisa soo garaacay inkasta oo uu qalad lagu galay balse kubbada ayaa u tagtay Suarez oo goolka ufurnaa balse u muuqday inuu offside ku jiray wuxuuba markiiba kubbada ku darbeeyay goolka Sevilla isaga oo shabaqa soo taabtay.
Laakiin waxa yaabka noqday ayaa ah in garsooruhu qaladka Neymar lagu tilmaamay iyada oo Suarez uu haysto faa’iido uu goolkan ku dhaliyay laakiin xaaladu intaas ku maydhamaan, waxaana kubbada la dhigay goobtii Neymar qaladka loogu galay, waxaana darbo cajiib ah tuuray Neymar oo birta garaacay balse darbadiisa ayaa birta ku dhacday iyada oo kubbadu xariiqada goolka inta ay cidhif ka soo bilawday ay cidhifka kale kaga baxday.Inkasta oo ay Pique iyo Suarez ay isku dayeen inay gursada ka faa’iidaystaan ayayna suurtogalin
Xamaasada ciyaarta ayaa noqotay mid cirka isku shareertay, daqiiqadii 37 aad ayuu Luis Saurez indha xadi gaadhay kadib markii uu isaga oo xerada ganaaxa Sevilla ka baxdan uu kubbad cajiib ah ku tuuray goolka Sevilla, kubbada ayaa u muuqatay inay baananka u baxayso goolhayaha Sevilla ayaan wax dadaal ah ku bixin laakiin kubbada ayaa birta goolka halka ugu saraysa kaga dhacday.
Qeybtii hore ee ciyaarta waxaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah laakiin markii la isku soo laabtay kooxda martida loo ahaa ee Sevilla ayaa ka naxsatay kooxda Barcelona iyagoo hogaanta u qabtay ciyaarta daqiiqadii 52aad, waxaana shabaqa u soo taabtay Michael Krohn-Dehli.
Sevilla halkaas kuma aysan joogsanin lix daqiiqo ka dib waxa ay dheereysteen hogaankooda iyadoo Vicente Iborra uu dhaliyay goolkii labaad ee ciyaarta ee kooxda martida loo ahaa. Kooxda Barcelona ayaana waaga uu ku baryay waana ay awoodi waayeen inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan labadaas gool ee degdegta ahaa ee ay dhaliyeen Sevilla.
Daqiiqadii 74aad ayay kooxda Blaugrana soo ceshatay hal gool oo agoon ah ka dib markii uu rigoore u saxiixay xiddiga reer Brazil Neymar, kaasoo ciyaarta ka dhigay 2-1, waxaana ay ciyaarta ku soo idlaatay natiijadaas oo ay guusha ku raacday kooxda Sevilla.
Barcelona ayaa ku jirta kaalinta 3aad iyagoo leh 15 dhibcood, waxaana ay dhibic ka hooseeyaan kooxda hogaanka heysa ee Villarreal oo kulan uu u harsan yahay.